काेहलपुर नगरपालिका वडा नं. १२ का अध्यक्ष खड्काकाे शव छिमेकी भारतकाे बहराज जिल्लामा फेला पर्याे – Radio Hatemalo FM
प्रकाशित मितिः १ माघ २०७६, बुधबार १६:१८ January 15, 2020 हातेमालो संवाददाता
बाँके । बाँकेको काेहलपुर नगरपालिका वडा नं. १२ का वडा अध्यक्षकाे शव छिमेकी देश भारतकाे बहराज जिल्ला सदरमुकाममा रहेको शंकर हाेटलमा मृत अवस्थामा फेला परेको छ ।
वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काकाे शव बहराज जिल्लामा फेला परेको विभिन्न स्रोतबाट थाहा भयाे, त्यसका लागि भारतीय प्रहरीले पनि अनुसन्धान गर्दछ । यदि उहाँको हत्या भएको भए नेपाल प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरि कार्वाहीकाे दायरामा ल्याउने बाँकेका प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर वलीले जानकारी दिनु भयो ।
वडा अध्यक्ष खड्काकाे शव नेपाल ल्याउनका लागि पहल भईरहेकाे नगपालिकाका सल्लाहकार कुलबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनु भयाे ।
उहाँको शव नेपाल ल्याउका लागि नेकपा बाँकेका सचिव अशोक काेईरालाकाे नेतृत्वमा नेकपाका नेता र परिवारका सदस्य भारत जाँदै हुनुहुन्छ । मृतक खड्का तीन छाेरी र तीन छारो रहेको नेकपाका नेता बसन्ती अधिकारीले जानकारी दिनु भयाे ।
भट्टराईका अनुसार वडा अध्यक्ष खड्का हिजो मंगलबार नगरसभामा समेत उपस्थित नहुनु भएको जानकारी दिनु भयो । उहाँको कसरी र कसैले बहराज लगेको हाे प्रहरीले यस बारे भारती प्रहरीको सहयोगमा अनुसन्धान गरिएको प्ररहरी प्रमुख वलीले जानकारी दिनु भयाे ।
जंगलमा गाई बेवारिसे फालेका ५ ट्रक सुर्खेत प्रहरीको नियन्त्रणमा
ज्येष्ठ नागरिक दिवसकै दिन ७४ वर्षीया बृद्धा बलात्कृत
विकास निर्माणका सवालमा सरकारलाई सघाउने निर्णय